प्राधिकरणको चिन्ता : रातमा खेर गइरहेको करोडौंको बिजुली के गर्ने ? – MEDIA DARPAN
प्राधिकरणको चिन्ता : रातमा खेर गइरहेको करोडौंको बिजुली के गर्ने ?
मिडिया दर्पण	 प्रकाशित १४ आश्विन २०७७, बुधबार १२:३९
१४ असोज, काठमाडौं । गत साता केही देशभर अबिरल वर्षा भएपछि विद्युतको माग दिनमा २ करोड १० लाख युनिटमा झर्‍यो । दैनिक २ करोड ६० लाख माग आइरहेका बेला मौसम चिसिएको र वितरणलाइनमा समस्या आएका कारण ती दिनमा ५० लाख युनिटसम्म बिजुली खेर (स्पिल) गयो ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक लेखनाथ कोइराला राति खेर गइरहेको बिजुली अहिले सबभन्दा चिन्ताको विषय बनेको बताउँछन् ।
पछिल्लो सयममा वितरणलाइनमा आएको समस्या समाधानमा केन्द्रित भएको प्राधिकरणलाई अब केही महिना खपत र निर्यात नभएर खेर जाने बिजुलीको व्यवस्थापन समस्याको विषय बन्ने देखिएको छ ।
राति ११ बजेदेखि ४ बजेसम्म माग घट्ने भएकाले अहिले पनि लाखौं युनिट बिजुली खेर गइरहेको छ । वर्षा रोकिएर नदीहरुमा पानी संग्लिएपछि रातको समयमा खेर फाल्नुपर्ने बिजुलीको परिमाण थप बढ्ने प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन्
यी विविध कारणले अब बिजुलीको माग/खपत घट्ने निश्चित छ । यो अवस्थामा अबको तीन महिना प्राधिकरणलाई बिजुली खेर जान नदिन ठूलो चुनौती हुनेछ ।
निमित्त कार्यकारी निर्देशक कोइराला अहिले नै प्राधिकरणले आफ्ना आयोजनाका उत्पादन युनिटहरु बन्द गर्नुपरेको बताउँछन् । यसो गर्दा बिजुली खेर जान्छ ।
तामाकोसी आएपछि के होला ?
नयाँ अड्चन नथपिए आगामी मंसिरसम्म माथिल्लो तामाकोसी आयोजना (४५६ मेगावाट) को पहिलो युनिटबाट बिजुली उत्पादन हुने अवस्था छ ।
वर्षायाममा बढी हुने बिजुली देशभित्रै खपत गर्ने सरकारी योजना अलमलमा छ । अबको एक वर्षमा प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत ९० युनिट बढाउने सरकारी लक्ष्य छ । अहिले २६० युनिट रहेको प्रतिव्यक्ति बिजुली खपत ३५० युनिटमा पुर्‍याउने योजना छ ।
सरकारले विद्युत प्राधिकरणलाई भारतको बोलकबोलमा बिजुली बिक्री हुने ‘डे–अहेड’ र ‘टर्म–अहेड’ मार्केटमा बिजुली बेच्न पूर्वस्वीकृति त दिएको छ, तर भारतले अहिलेसम्म आफ्नो बजारमा प्राधिरकणलाई बाटो खोलिदिएको छैन ।
भारतको ‘एनटीपीसी विद्युत ब्यापार निगम लिमिटेड’ (एनभीभीएन)सँग यसबारे छलफल भइरहेको ऊर्जासचिव दिनेशकुमार घिमिरे बताउँछन् ।
देउवा पत्नी आरजूले भनिन् – “महिला २१ औ शताब्दीमा पुगिसके तर पुरुष भने १८ औं शताब्दी छन्”